Taa na ukwuu digitized ụwa, ihe niile ị chọrọ bụ na ekwentị gị ma ọ bụ ngwaọrụ. Anyị abịawo-adabere na anyị smart ngwaọrụ nke ukwuu nke na ọ bụ n'ezie-agaghị ekwe omume agaghị abụ na anyị igwe ma ọ bụ ngwaọrụ. Nke a pụtakwara na a otutu nke ọmụma anyị nwere na anyị ntị na ngwaọrụ dị mkpa n'ezie ka ụbọchị na-agba ọsọ nke ndụ anyị. N'ihi nke a na data anyị nwere na anyị ntị ga-echebe. Ọ bụrụ na ị na-arụ ụka na nkwupụta a, jụọ onye mmadụ nwụnahụrụ niile nke data ha na ekwentị na nwere dịghị ụzọ nke na-ya laghachi azụ.
Bụ nke a mere ekwentị transfer software dị nnọọ mkpa n'ụwa taa. Nke a na ụdị software ga-enyere gị ndabere data na ị nwere na ekwentị gị na kọmputa gị otú ị mgbe niile nwere oyiri bụrụ na nke ọ bụla ọnwụ. Ekwentị transfer software na-abịa na kemfe mgbe ị kwesịrị nyefee gị niile data site na otu ekwentị ọzọ. A ndị mmadụ mkpa ime nke a mgbe ha na-azụta ọhụrụ na ekwentị na ga-amasị ha niile kọntaktị, ozi na data on ọhụrụ ha ekwentị.
Part 1. Top ekwentị na ekwentị transfer software
Part 2. Top iPhone na kọmputa software
Part 3. Top Android na kọmputa software
Part 4. Offical ekwentị transfer software maka smart igwe
1. Wondershare MobileTrans - 1-click ekwentị Data Nyefee Software
Nyefee ọdịnaya n'etiti Android, iDevice na Nokia (Symbian) na 1 Pịa.
Ndabere Android, iDevice na Nokia (Symbian) ekwentị data na kọmputa.
Nkwado 2000+ igwe na-agba ọsọ Android, Nokia (Symbian) na iOS.
Akwado ọsọ ọsọ / mmepụta ekwentị: Ọ na-akwado fọrọ nke nta niile ntị gụnyere iPhone, Android ngwaọrụ na Nokia, na-agụnye Samsung S6 na S6 Edge. Mụta ihe ebe a >>
Akwado kọmputa os: Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP (32 & 64bits) / Mac OS X 10.6, 10.7, 10,8, 10,9, 10.10, 10,11
Akwado smartphone os: Android 2.1 ka Android 5.0 / iOS 5 iOS 9
2. MOBILedit - Ekwentị Nyefee Software
MOBILedit na-eji ọtụtụ nde mmadụ maka nzube nke na-ebufe ọdịnaya ekwentị na ijikwa ya site ngwaọrụ ndị ọzọ. Nke a bụ oké ekwentị Iṅomi software nke ga-akwagakwa niile nke data site na ekwentị gị n'ime ọhụrụ ekwentị ma ọ bụ PC. Ị nwere ike ịchịkwa ma jikwaa ekwentị gị na desktọọpụ si nkasi obi nke gị PC.
Nyefee faịlụ site na otu ekwentị ọzọ.
Jikwaa gị Internet nchekwa na akaụntụ.
Ebube ọdịnaya ekwentị Manager.
Ebuli ekwentị ọdịnaya na-alụbeghị di aka.
Sistemụ akwado: Ọ nwere ike na-eji na-nyefee data si iOS ka Android, Android iOS, iOS ka iOS na Android ka Android. Ọ na-arụ ọrụ na android gụnyere Android 5.0 na iOS gụnyere iOS 9.0 ngwaọrụ.
Akwado ọsọ ọsọ igwe: Ọ dị mfe iji na-arụ ọrụ na kasị ntị gụnyere Apple, HTC, Sony, LG, Motorola, Nokia, Blackberry na Samsung.
Akwado mmepụta igwe: Ụfọdụ n'ime ekwentị mkpanaaka na-akwado na a software agụnye iPhone, Sony, Motorola, LG, Nokia, Samsung na Blackberry ngwaọrụ.
Download njikọ: Ịnwere ike ibudata Windows ma ọ bụ Mac Version ebe a http://www.mobiledit.com/phone-copier
1. TunesGo - iPad / iPod / iPhone Data Nyefee Software
Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) na-enye gị ike nyefee music, videos, foto na kọntaktị fron otu iPhone / iPod / iPad ọzọ mfe. Wezụga ya, ọ na-ahapụ gị nyefee listi ọkpụkpọ, songs, videos, iTunes, pọdkastị ka / gị iPhone, iPod na iPad. Ị nwere ike Ibu Ibu gị iDevice na music na video nke bụ dakọtara na iTunes. The software bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iOS 7 na ọhụrụ iOS 9.
Kpọmkwem nyefee music, videos, na kọntaktị na photos n'etiti Apple ngwaọrụ.
Nyefee ọdịyo na video si iDevice ka iTunes na PC.
Mbubata na tọghata music na video ka iDevice enyi na enyi formats.
Ịdọrọ na dobe photos na site na Apple ngwaọrụ
Save iPhone MMS, SMS na iMessages dị ka XML / TXT / HTML formats.
Akwado ekwentị: Ọ na-akwado fọrọ nke nta niile Android ngwaọrụ na iOS ngwaọrụ. Mụta ihe ebe a >>
Akwado kọmputa os: Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP / Mac OS X 10.6, 10.7, 10,8, 10,9, 10.10, 10,11
Na PhoneTrans software ị nwere ike mfe nyefee music, photos, ngwa, fim na videos si gị iPhone gị na kọmputa.
Sistem akwado: Ọ dị mfe iji na dị na ma ndị Mac na Windows nyiwe. I nwekwara ike nyefee niile nke data na kọmputa gị ka gị na iPhone.
Akwado ekwentị: Ọ na-akwado iPhone, iPad na iPod aka
Download njikọ: Ịnwere ike ibudata PhoneTrans ebe a: http://www.imobie.com/phonetrans/download.htm
Na iPhonetoPC i nwere ike nyefee faịlụ site na gị iPhone na kọmputa gị na dị nnọọ otu Pịa. I nwekwara ike ndabere nile gị faịlụ gụnyere na kọntaktị na oku na ndekọ na kọmputa gị otú i nwere ike mfe weghachi ha emechaa. Ọ bụkwa dakọtara na iPad na iPod.
Akwado ekwentị: Ọ na-akwado iPhone, iPad na iPod
Akwado kọmputa os: Ohere / Mac OS X
Akwado smartphone os: iOS 5 iOS 9
Download njikọ: Ịnwere ike ibudata PhoneTrans ebe a: http://www.iphone-to-pc.com
Wondershare Mobile Go bụ ihe magburu onwe software ọ bụla Android ekwentị. N'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee ekwentị data site na otu Android ekwentị ọzọ ma ọ bụ otu Android ekwentị na PC. Ị nwere ike ịmepụta ndabere nke ekwentị gị data ma weghachi ya mgbe e mesịrị mgbe chọrọ. Ị nwere ike ijikwa na ekwentị gị ma ọ bụ na-enweghị na eriri USB.
Hazie gị ngwa ọdịnala na nke a software.
Nyefee na music, videos na foto / si gị android ngwaọrụ.
Nyefee na dezie kọntaktị site PC keyboard.
Export na nkwado ndabere ozi na Android ekwentị na kọmputa.
Na nkwado ma weghachite enweghị ihe ọ bụla data ọnwụ.
Jikwaa ekwentị oku na kọmputa.
Ego ekwentị gị ọcha nchọgharị akụkọ ihe mere na caches.
Akwado ọsọ ọsọ / mmepụta ekwentị: Ọ na-akwado fọrọ nke nta niile ntị gụnyere iPhone, Android ngwaọrụ na Nokia. Mụta ihe ebe a >>
Nke a software dị dị ka ihe android App nakwa dị ka a Windows PC ahịa. Ọ na-ekwe ka onye ọrụ na nkwado ma weghachite faịlụ na ha android ngwaọrụ. I nwekwara ike nyefee data si gam akporo ka Android. Ịnwere ike ịnyefe Audio, Video, kọntaktị, ozi na ọbụna oku na ndekọ.
Ọrụ Systems akwado: Ọ na-akwado niile Android nsụgharị gụnyere ọhụrụ Android 5.0.
Akwado igwe: Ọ na-akwado nnọọ niile Android ngwaọrụ tinyere Samsung ntị, HTC, Sony, LG, Motorola na ọtụtụ ndị ọzọ.
Download njikọ: Ịnwere ike ibudata SyncDroid si Google Play ahịa ma ọ bụ ebe a http://www.sync-droid.com/
Part 4. Official ekwentị Nyefee Software maka Smartphones
Nwere ike ị chọrọ iji ukara transfer software fir gị akpan akpan ekwentị. Ka anyị leba anya na onye ọ bụla na ebe ị pụrụ ịchọta ha.
1. iMazing maka iPhone
The iMazing software-enye gị ohere nyefee data gụnyere ihe nile media na mwube gị iPhone. The software enye gị ohere mfe nyefee niile data gị iPhone ka a ngwaọrụ ọhụrụ. I nwekwara ike ike zuru backups gụnyere media na égwu nakwa dị ka weghachi dum data nile na otu click.
Ọrụ Systems akwado: Ọ na-arụ ọrụ Mac na Windows kọmputa.
Akwado igwe: Ọ na-akwado iPhone, iPad na iPod.
Download njikọ: Ịnwere ike ibudata iMazing ebe a http://imazing.com/
Makwaara dị ka HTC mmekọrịta Manager, a software na-nyere site HTC-eji na ya niile mobile ngwaọrụ. The software-enye gị ohere ka mmekọrịta media n'etiti ekwentị gị na HTC ngwaọrụ mkpanaaka. I nwekwara ike ike azụ-acha ọkụ niile data na gị HTC ekwentị gị na kọmputa na weghachi mgbe e mesịrị.
Ọrụ Systems akwado: Ọ na-arụ ọrụ Windows kọmputa.
Akwado igwe: Ọ na-akwado HTC ngwaọrụ.
Download njikọ: Ịnwere ike ibudata HTC PC Suite ebe a http://htc-pc-suite.soft112.com/
3. Samsung kies - Samsung Mobile Nyefee Ngwá Ọrụ
Samsung Kies bụ otu nke kasị mma ekwentị transfer software nke ike-eji nyefee ekwentị data ihe atụ photos, na kọntaktị na music si ekwentị na PC. Ị nwere ike ijikọ ekwentị gị na PC gị ma ọ bụ mbadamba-ejighi eriri na mgbanwe nile ga-akpaghị aka ga-mere. Nke a software dokwara dakọtara na inyom di ha nwụrụ nakwa dị ka Mac sistemụ.
Bugharịa data site na otu Samsung ekwentị ọzọ.
Nyefee photos, videos na music si ngwaọrụ ka na kọmputa.
Jikwaa faịlụ gị dị ka photos, music na enyemaka nke a software.
Onwe elu mmezi ohere site ebufe data site na ekwentị gị PC.
Ọ na-ike ga-eji jikwaa gị Samsung ngwaọrụ.
Akwado ekwentị: Hot Samsung ngwaọrụ, nza nke ngwaọrụ na-anaghị akwado.
Akwado kọmputa os: Windows / Mac OS X
Akwado smartphone os: Android 2.1 ka Android 5.0
Ọ bụrụ na ị nwere otu LG ekwentị mgbe ahụ LG PC Suite bụ ihe dị mkpa ka ị nkwado ndabere na mpaghara jikwaa gị data gụnyere foto gị, video na music. Nke a software-enye gị ohere mfe mmekọrịta gị na kọntaktị na nkwado ndabere na mpaghara weghachite faịlụ gị LG ngwaọrụ.
Akwado igwe: Ọ na-akwado LG ngwaọrụ.
Download njikọ: Ịnwere ike ibudata LG PC Suite ebe a http://www.lg.com/uk/support/pc-suite
Otú nyefee faịlụ ka Galaxy S3 si PC
> Resource> Nyefee> Top 9 ekwentị Nyefee Software